Ọ dị mma ka ụmụaka gbaa ụkwụ efu? | Bezzia
Ọ dị mma ka ụmụaka gbaa ụkwụ efu?
Maria Jose Roldan | 30/04/2021 22:00 | Ndị nne ndụmọdụ
A na-enwe mgbe nile ọnọdụ na-emegiderịta onwe ha gbasara ma ọ dị mma maka ụmụaka ịgba ụkwụ efu ma ọ bụ ka mma karịa iji akpụkpọ ụkwụ. Ọtụtụ ndị nne na nna na-egbochi ụmụ ha ịgbara ụkwụ ụkwụ bata n'ụlọ na-atụ egwu na ha ga-emesị bụrụ ndị oyi na-atụ.
Nke a bụ ezigbo akụkọ ifo kemgbe nje na-abanye n'ime ahụ site na akụkụ iku ume. N’aka ozo, ndi okacha mara maka okwu a nyere ntuziaka ka nwata ahu gba aka n’ukwu ebe ọ bụ na n'ụzọ a ka ụkwụ si eto nke ọma.
1 Childrenmụaka kwesiri ịkpụ akpụkpọ ụkwụ?
2 Kedụ uru dị n'ụmụaka ịgba ụkwụ efu?
3 Lezie anya ma ọ bụrụ na nwata ahụ agba ụkwụ efu
Childrenmụaka kwesiri ịkpụ akpụkpọ ụkwụ?
Ndị ọkachamara na-adụ ọdụ megide itinye ụmụaka na akpụkpọ ụkwụ n'oge ọnwa mbụ nke afọ. A bịa n’ichebe ụkwụ obere ụkwụ gị site na okpomoku ma ọ bụ ụjọ ọ bụla, yi sọks ụfọdụ. Cheta na iri ari bu isi ihe maka ezi mmepe nke sistemu psychomotor nke umuaka, ya mere ha agaghi eyiri akpụkpọ ụkwụ n'ụkwụ ha.
Ozugbo nwatakịrị ahụ malitere ịga ije, ndị nne na nna kwesịrị ịhọrọ itinye ụdị akpụkpọ ụkwụ na-agbanwe agbanwe ma na-eku ume nke ọma. Site na afọ 4 ma ọ bụ 5, akpụkpọ ụkwụ a na-eji eme ihe ga-esi ike ma sie ike iji chebe ụkwụ nwata.
Kedụ uru dị n'ụmụaka ịgba ụkwụ efu?
Foga ụkwụ ọtọ na-enweghị akpụkpọ ụkwụ ga-enye ohere ka usoro ụkwụ ụkwụ ka mma, na-egbochi ha ịta ahụhụ site na ihe a maara dị ka ụkwụ dị larịị.
N'oge ndụ mbụ, enwa ọhụrụ ga-enwe mmetụta dị ukwuu n'ụkwụ karịa n'akas Site n'ịga ụkwụ ọtọ, ụkwụ gị na-enyere gị aka ịchọpụta ụwa gbara gị gburugburu. Na mgbakwunye, ịga ụkwụ ọtọ na-enye ohere ma ọ bụ na-atụnye ụtụ na mmepe ka mma nke uche niile nke nwatakịrị.
Mgbe ị na-agba ụkwụ efu, onye obere ga-enwe ụdị textures dị iche iche site na ụkwụ ha. Nke a na - enyere nwata ahụ aka ịzụlite mmetụta dị iche iche akpọrọ kinesthetic, nke na-enyere aka melite ọnọdụ nke akwara dị iche iche na iji mee ka nkwonkwo nke ahụ dị ike.
Lezie anya ma ọ bụrụ na nwata ahụ agba ụkwụ efu
Na ọ bụ ihe amamihe dị na-aga ụkwụ efu, Ọ pụtaghị na nwatakịrị ga-enwerịrị oge ọ bụla na-enweghị ụdị akpụkpọ ụkwụ ọ bụla. N'ihe banyere ịga n'ọdọ mmiri, ọ dị mkpa na onye obere na-eyi slippers, ebe ọ bụ ebe a na-ebutekarị ọrịa dị iche iche.
Ọ bụrụ na enwere ike ịme ụdị mmerụ ahụ mgbe ị na-eje ije na-enweghị akpụkpọ ụkwụ, ọ dị mkpa ịmata ihe mmerụ ahụ kpatara. N'ọtụtụ ọnọdụ ọ dị mkpa iji nweta ọgwụ mgbochi tetanus iji gbochie ọrịa ahụ ịka njọ ma kpatara nsogbu siri ike ma dị njọ.
Ndị nne na nna kwesịrị ịma n'oge niile nke ọnọdụ obere ihe nwere ike ịgba ụkwụ kpamkpam na mgbe ha kwesịrị iyi akpụkpọ ụkwụ. Cannot gaghị ekwe ka nwatakịrị ahụ laa mgbe ọ bụla na - enweghị akpụkpọ ụkwụ ma mara ụkwụ ụkwụ ya.
Na nkenke, Ndị dọkịta na ndị ọkachamara na-adụ ọdụ ka ụmụaka na-agba ụkwụ efu kpamkpam n'otu oge kwa ụbọchị. Eziokwu nke inwe ala ma na-eje ije na ya na-enweghị ụdị akpụkpọ ụkwụ ọ bụla, na-enyere ha aka inwe nnukwu mmepe nke usoro psychomotor ha n'etiti uru ndị ọzọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Bezzia » Ndị nne » Ndị nne ndụmọdụ » Ọ dị mma ka ụmụaka gbaa ụkwụ efu?
Typesdị 6 okpokoro akwa akwa iji nye ime ụlọ